Maxim Hodak muDutch gweta-pa-mutemo | Law & More B.V.
Maxim Hodak muDutch gweta-pa-mutemo ane yakawanda yepasi rose (mumba) ruzivo rwepamutemo nechinangwa chakanangana nekushandira vatengi kubva kumisika yeEurasian muNetherlands mundima dzeDutch mutemo wemakambani, mutemo wezvekutengeserana weDutch, mutemo wepasi rose wezvekutengeserana, kambani mari uye kubatanidzwa uye kuwanikwa, kumisikidza uye manejimendi epurojekiti yakaoma yepasi rose uye mutero / zvivakwa zvemari Maxim Hodak anotaurirana muchiDutch, ChiGerman, ChiFrench, Chirungu, ChiRussian uye chiUkraine Maxim Hodak akatarisa kune vatengi vanobva kuEurasia semhinduro kuchikumbiro chiri kukura cheavo vatengi kuti vagamuchire zvakadzama mutemo wezano nerutsigiro muhurongwa hwekumisikidza mashandiro uye Maxim Hodak akatanga basa rake repamutemo kuClifford Chance Brussels muna 2002. Mushure maizvozvo akashanda segweta repamutemo kuING Bank muNetherlands. Muna 2005 akakumbirwa kuti ajoine terevhizheni yepasi rose sevazhinji gweta uye maneja maneja wekambani inobata kuti vatsigire sangano mukukura kwayo kwepasirese nekuwedzera kubva kuNetherlands. Kutanga kubva muna 2009 Maxim Hodak akaramba achienderera mberi nekupa mabasa epamutemo kune akasiyana vatengi veEurasia muNetherlands achitarisa pamutemo wekambani neyechibvumirano, mutero wepasi rose, kurongeka kwemidziyo uye mari yeprojekti. Maxim Hodak akabata Master's degree muMutemo (University of Amsterdam) uye Post-graduate degree redzidzo yehunyanzvi munzvimbo yeInvestment Mari (EHSAL Management Chikoro, Brussels). Maxim Hodak anoenderera mberi achifungisisa nekuenderera mberi kweDutch mutemo uye mutero dzidzo.
Maxim Hodak igweta reDutch - pamutemo ane ruzivo rwakakura rwenyika (mu-imba) ruzivo rwemitemo rwakanangana nezvekutarisira vatengi kubva kumisika yeEuroasi muNetherlands muminda yemutemo weDutch Corporate, mutemo wekutengesa weDutch, mutemo wekutengeserana wepasi rese, mari yemakambani uye inobatanidza uye kutora, kumisikidza uye manejimendi emapurojekiti akaoma epasi rose nemitero / yemari zvimiro. Maxim Hodak anotaurirana muchiDutch, chiGerman, chiFrench, chiRungu, chiRussia neUkraine.
Maxim Hodak akatarisa kune vatengi vanobva kuEurasia semhinduro kuchidikanwa chakawedzera chevatengi vakadaro kuti vagamuchire zano rakakura rezvemutemo uye rutsigiro mune dhizaini yekumisa mashandiro uye kurongedza midziyo uye zviitiko mukati uye kuburikidza neDutch kutonga.
Maxim Hodak akatanga basa rake repamutemo paClifford Chance Brussels muna 2002. Pashure pazvo akashanda semazano epamutemo kuI Bank Bank muNetherlands. Muna 2005 akakumbirwa kujoina imwe nhepfenyuro yeTV yenyika dzese semanejimendi mukuru uye maneja manejimendi wekambani inobatsira kutsigira indasitiri mukukura kwayo nedzimwe nyika kubva kuThe Netherlands. Kutanga kubva muna2009 Maxim Hodak akaenderera mberi achipa mabasa epamutemo kune vatengi vakasiyana-siyana veEuropean muNetherlands aine tarisiro pamutemo wekudyidzana uye chibvumirano, mutero wepasi rese, zviumbwa zvinogadzirwa uye mari yeprojekiti.
Maxim Hodak akabata degree raMasters muLaw (University of Amsterdam) uye Post-graduate nyanzvi yedzidzo degree munzvimbo ye Investment Finance (EHSAL Management School, Brussels). Maxim Hodak ari kuwedzera kubatikana nekuenderera mberi kwechiDutch mutemo wezvemitemo nedzidzo.